Nin lagu eedeeyay inuu kufsaday gabar 13 sano jir ah oo maanta la xukumay – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Nin lagu eedeeyay inuu kufsaday gabar 13 sano jir ah oo maanta la xukumay
Waxaa maanta maxkamadda magaalada Burtinle ee maamulka Puntland lasoo taagay nin lagu soo eedeeyay inuu 26-ka bishii hore ee April kufsaday gabar 13 sano jir ah, kaas oo lagu xukumay 5 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed.
Ninkaasi oo lagu magacaabo Bashiir C/qaadir ayaa lagu helay fal dambi ah inuu deegaanka Burtinle ee gobolka Nugaal ku kufsaday gabar 13 sano jir ah, oo ka mid ah gabdhaha ku nool deegaankaas.
Eedeysane Bashiir C/qaadir ayaa sidoo kale lagu xukumay inuu bixiyo lacag dhan 3 milyan oo shillinka Soomaaliga ah iyo 44 neef oo Ari ah.
Rag kale oo iyagane lagu soo eedeeyay inay kufsiga gabadhaasi ku lug lahaayeen ayaa lasii daayay, kadib markii lagu waayay wax dambi ah.
Sidoo kale, maxkamadda ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamtay warar dhawaan ay qoreen qaar ka mid ah website-yada Soomaalida, kuwaas oo kiiska kufsigaan ku sheegay inuu ahaa mid aargoosi ah oo horay uga dhacay deegaankaas.
Dhinaca kale, wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamulka Puntland Anisa C/qaadir Xaaji Muumin ayaa horey u sheegtay in kufsiga uu dhibaato ba’an ku haayo gabdhaha Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada Puntland, loona baahan yahay in si deg deg arrinkaasi wax looga qabto.
Si kastaba ha ahaatee, inta badan gobolada dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada uu ka arrimiyo maamulka Puntland ayaa waxaa ka dhaca falalka kufsiga ah, waxaana falal dambiyeedkaasi inta badan geysta dad wax magarato ah.